'छ माया छपक्कै' को सन्देश: 'गलत कुराको बिरोध गरौं, झोले नबनौं भन्ने हो' | Citizen Post News
काठमाडौं । गत शुक्रबार रिलिज भएको नेपाली चलचित्र 'छ माया छपक्कै' अहिले निकै चर्चामा रहेको छ । फिल्मको कथाबस्तु सामान्य भएता पनि चलचित्रले दिन खोजेको म्यासेज भने निकै राम्रो छ । यसैबीच, फिल्मको विभिन्न सकारात्मक तथा नकारात्मक टिकाटिप्पणी पनि भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा चलचित्रका निर्माता दिपकराज गिरीले आफूले निर्माण गरेको चलचित्रप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्नेलाई गजब शैलीमा प्रहार गरेका छन् ।
उनले आफ्नो फेसबुक वालमा लेख्दै भनेका छन्,'चलचित्र छ माया छपक्कै हेरेपछि केही साथीहरुले यस्लाई पनि राजनीतिक चश्माले हेरेर बिश्लेषण गरेको पॉए । केही साथीले 'यो त कम्यूनिस्ट बिरोधी चलचित्र पो रहेछ' भन्दै आरोप लगाएर आफ्नो फेसबुक वालमा सजाएको पाएँ । अस्ती अर्को एक साथीले 'काँग्रेसलाई त पूरै माइनस गर्नु भएछ त दीपकजी रे ? अनि हिजो मात्रै अर्को एक जना साथीले लेख्नु भयो 'तपाई त ज्ञानेन्द्र शाहीहरुको लाइनमा हो कि क्या हो ? कति हाँस्नु ?'
मान्छेको मस्तिष्क कतिसम्म राजनीतिक प्रदूषणबाट ग्रसित भएको रहेछ भन्ने कुरा यो सवै पढेँर आफूलाई भान भन्दै उनले भने,'किन हामी हरेक कुरालाई राजनीतिक चश्माले मात्र हेछौं ? म पनि एउटा दलको आस्था राख्छु, आस्थाको हिसावले नजिक पनि छु तर त्यो निर्वाचनमा मात्र प्रकट हुन्छ, मात्रै निर्वाचनमा । त्यो मेरो विचारलाई मैले कहिल्यै आफ्नो कर्ममा प्रतिबिम्वित हुन दिएको छैन र भविश्यमा पनि दिन्न ।'
उनले आफ्नो चलचित्रको कथा र सन्देशबारे थप प्रष्ट पार्दै भने,'पार्टीले जे निर्णय गरे पनि 'हो मा हो नमिलाऔ, गलत कुराको बिरोध गरौं, झोले नबनौ तथा जनताको पीडालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गरौं' भन्ने नै हो । यसलाई अन्यथा नबुझ्न आग्रह गर्दछु ।' उनले आफ्नो पृष्ठभूमि एक दलीय वा कुनै ब्यक्तिले शासन गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा नरहेको र हुन पनि नसक्ने बताए । उनले गलत बुझाईलाई मनबाट खारेज गरिदिनु पनि आग्रह गरे, त्यो पनि फेसबुकको वालबाटै लेखेर ।